အချစ်ဦး Vs အချစ်ဆုံး – For her myanmar
Posted on October 29, 2018 October 30, 2018 Author Sugar Cane	Comment(0)
အချစ်ဦး နဲ့ အချစ်ဆုံးတို့ ဘာတွေကွာခြားကြလဲဆိုတော့ ဒီလိုလေ …
ရည်းစားဦးကို မြေးဦးရသည်အထိ မမေ့ဘူးဆိုတဲ့ စကားပုံလည်းရှိသလို အများကလည်း အချစ်ဆုံးနဲ့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် ရည်းစားဦးကို မမေ့နိုင်ဘူးလို့လည်း ဆိုကြတယ်လေ။ ယောင်းတို့ရော အဲဒီစကားက မှန်တယ်ထင်လားဟင် ?
ယောင်းတို့ရဲ့ အချစ်ဦးကို အချစ်ဆုံးရှိနေတာတောင် သတိရနေမိသေးလား ?
အချစ်ဦးနဲ့ ဆုံမိတာနဲ့ ဒါမှမဟုတ် အချစ်ဦးအကြောင်း တွေးမိလိုက်တာနဲ့ ဘယ်အသက်အရွယ်အေထိရောက်ရောက် ရင်ခုန်သံတွေ မြန်လာတာပဲဆိုတာမျိုး ဖြစ်ဖူးကြုံဖူးလား ?
အက်ဒ်မင့်အတွက်တော့ အဲဒါတွေက မမှန်ဘူးလို့ ထင်တယ်။ ဆယ်ကျော်သက်တုန်းက ရင်ခုန်ဖူးတဲ့ အချစ်ဦးတော့ ရှိခဲ့တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ အခုအခါ သူ့အကြောင်းတွေးမိတာနဲ့ ရင်ခုန်သံမြန်လာဖို့ မပြောနဲ့ စိတ်ကူးထဲက သူ့ပုံရိပ်ဆိုတာတောင် ခပ်ဝါးဝါးပါပဲ။ တွေ့မိ၊ ဆုံမိရင်လည်း ရင်ခုန်သံမြန်ဖို့ထက် အရင်က ရူးခဲ့မိတာတွေ ပြန်တွေးမိပြီး ရယ်ချင်နေမိမယ် ထင်ပါရဲ့နော်။
ဘာကြောင့် ဒီလိုတွေ ဖြစ်ရလဲ တွေးမိတဲ့အခါ အချစ်ဦး နဲ့ အချစ်ဆုံးတို့ကြားက မတူတဲ့ အချက်လေးတွေကို စဉ်းစားမိလာတယ်လေ။ ဒီအချက်လေးတွေကို ယောင်းတို့လည်း သိရအောင်ပြောပြရမယ်ဆိုရင် ….
၁။ အချစ်ချင်း မတူဘူး။
အချစ်ဦးကို ချစ်ခဲ့တုန်းက အရူးအမူးနဲ့ စွဲစွဲလန်းလန်း ချစ်ခဲ့မိတာမျိုးလေ။ ဘာကြောင့် ချစ်တာလဲလို့ မေးကြည့်ရင်လည်း သူက ချစ်စရာကောင်းလို့ ရင်ခုန်ပြီးချစ်တာ၊ သူရဲ့ ပုံစံလေးကို စွဲလမ်းမိနေလို့ ချစ်တာ ဆိုတာထက် ဖြေစရာမရှိပါဘူး။
အချစ်ဆုံးကိုတော့ ဘာကြောင့် ချစ်တာလဲဆိုရင် ဖြေစရာတွေက အများကြီးပါ။ အချစ်ဆုံးကို ချစ်မိတာကတော့သူ့ရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကလည်း အနည်းအကျဉ်းပါသလို၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့ စိတ်ထားကိုချစ်မိတာ၊ ကိုယ့်ပေါ် အနွံတာခံနိုင်တာကို ဝမ်းသာပြီးချစ်တာ အစရှိသဖြင့်ပေါ့။ ပြောစရာတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုမှ မရှိဘဲ ချစ်မိတာတောင် ဖြစ်နိုင်သေးတယ်လေ..
၂။ စွဲလမ်းစိတ် ကွာခြားတယ်။
အချစ်ဦးဆိုတာတော့ ကိုယ်တော်တော်စွဲလမ်းခဲ့ရတဲ့သူပါ။ သူ့ရဲ့ အပြုံးလေးတစ်ခုက ကိုယ့်အိပ်မက်ထဲ စိုးမိုးနေခဲ့တာမျိုး၊ သူ့နဲ့ နူးညံ့တဲ့ အနမ်းလေးကို တသသဖြစ်နေမိတာမျိုး၊ သူ့ကို မတွေ့ရရင် မနေနိုင်အောင် စွဲလမ်းနေတာမျိုးပေါ့။
အချစ်ဆုံးကိုတော့ မတွေ့ရ မနေနိုင်လို့ ဆိုရအောင် စွဲလမ်းစိတ်တော့ နည်းပါတယ်။ မတွေ့ရတာ ကြာရင်တော့ လွမ်းမိပေမဲ့ တကယ်တမ်းတော့ မတွေ့ဖြစ်တဲ့နေ့တွေမှာ သူလည်း သူ့အလုပ်သူလုပ်၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းကြရတာပါပဲ။ ဒါက အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်း ဆိုင်မယ်ထင်တယ်နော်။
Related Article >>> အချစ်ဦးနဲ့ လွဲခဲ့သူများအတွက်
အချစ်ဦးကို စွဲလမ်းမိတာက လွဲရင် အခုအချိန်မှာ ပြန်တွေးမိတော့ သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ကြားမှာ ထူးထူးခြားခြား သံယောဇဉ်တွယ်စရာရယ်လို့လည်း မရှိဘူးထင်ပါတယ်။ ရင်ခုန်ရတာ တစ်ခုတော့ရှိတာပေါ့နော်.. မိဘတွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်ရှောက်ခံရတဲ့အရွယ်ဖြစ်နေတော့ အတူရှိရတဲ့ အချိန်ကနည်းပြီး ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ခဏတာ တွေ့ခဲ့ရတာ ဆိုတော့လေ။ (အများအားဖြင့် ဖြစ်တတ်တာကို ပြောတာပါနော်… မတူတာတွေလည်း ရှိတာပေါ့)
အချစ်ဆုံးနဲ့ လက်တွဲတဲ့အချိန်မှာတော့ အရွယ်ရောက်လာပြီမို့ မိဘတွေကလည်း ပြောနေဆိုနေတာမျိုး သိပ်မရှိ၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ်လည်းတွေ့ရ၊ အတူရှိချိန်တွေလည်း ပိုများလာတယ်၊ အသက်အရွယ်အလိုက် ဘဝရဲ့ အခက်အခဲတွေကို အတူတူဖြေရှင်းရတာလည်း ရှိလာတယ် ဆိုတော့ ဒီအခြေအနေတွေက သံယောဇဉ်ကြိုးတွေကို ပိုခိုင်မြဲလာစေတယ် ထင်ပါရဲ့နော်။
အချစ်ဦးနဲ့ပဲ ချစ်၊ အချစ်ဦး နဲ့ပဲ ဖူးစာဆုံကြသူတွေကလည်း တစ်မျိုးပျော်စရာကောင်းသလို၊ အချစ်ဦး နဲ့ ဆုံဆည်းခွင့်မရပေမဲ့ အချစ်ဆုံးနဲ့ ဆုံစည်းခဲ့ရသူတွေကလည်း ပျော်စရာကောင်းတာပါပဲ။ အချစ်ဦး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချစ်ဆုံးပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အပေါ် ချစ်ခင်ကြင်နာတတ်တဲ့ လက်တွဲဖော်၊ ကိုယ့်ပေါ် နားလည်မှု အပြည့်ရှိတဲ့သူကတော့ ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပဲ မဟုတ်လား…
ယောင်းတို့ရော အခု အချစ်ဦးနဲ့လား၊ အချစ်ဆုံးနဲ့လားဆိုတာ ပြောပြခဲ့ဦးနော်….
Tagged First Love, love, Relationship, Teenage, true love
မိမိလက်တွဲဖော်နှင့် အိမ်ထောင်ရေးသုခ ပြည့်ဝပြီး ခိုင်မြဲတဲ့ နားလည်မှု ရှိစေဖို့ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာရင် တစ်ယောက်တည်း နေလို့မရတာ သဘာဝပါ။ အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာလည်း အချစ်တွေပိုတိုးပြီး နားလည်မှုတွေ ခိုင်မြဲဖို့ဆိုတာ တကယ်တမ်းတော့ လွယ်ကူလှပါတယ်။ လင်မယားချင်း အိပ်ရာပေါ်က ကိစ္စတွေမှာ အဆင်ပြေဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်တင်းနှီးနှောတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်း ရရှိစေပါတယ်။ – ကိုယ်ခံအား ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ – နှလုံးကျန်းမာရေးကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။ – သွေးဖိအား ကျဆင်းမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – လေ့ကျင့်ခန်း တစ်မျိုးအနေနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ – နာကျင်မှုနဲ့ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။ – ယောက်ျားလေးတွေမှာဆို ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားမှုကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ – ကောင်းမွန်စွာ အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ – စိတ်ဖိစီးမှုကို လျော့ကျစေပါတယ်။ […]
Posted on December 15, 2017 Author Khine
လက်ထပ်ပြီးတဲ့အခါ နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်နိုင်ဖို့က အရေးအကြီးဆုံးပါ
Posted on September 7, 2017 Author Hana
Crush မိရင် ဒီဒုက္ခတွေ ကြုံကိုကြုံရနိုင်ပါတယ်..